Dhageyso Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Baay. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Baay.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey dagaal culus ku qaadeen mid ka mid ah degmooyinka gumeysiga ku jira ee ay ku suganyihiin ciidamada Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaatka Somalida ee Kabo qaadka u ah Amxaarada Itoobiya.
Dagaalkan waxa uu ka dhacay degmada Qansaxdheere ee gobalka Baay waxeyna ciidamada Shabaabul Mujaahidiin si gaar ah u beegsadeen fariisinka maleeshiyaatka Murtadiinta ee Kabo qaadka u ah Amxaarada ay ka sameysteen gudaha degmadaasi.
Dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,iyadoona dagaalka uu socday muddo ku dhaw Saacad waxeyna dadka deegaanka xaqiijiyeen in dagaalkan uu ka mid noqonaya dagaaladii ugu cuslaay ee mudooyinkii dambe ee ka dhacay degmadaasi.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa la xaqiijiyay in si buuxda ay ula wareegeen gacan ku heynta saldhiga ay weerareen taasi oo muujineysa in khasaara culus oo Naf ah maleeshiyaatka maamulka gaala raaca Shariif Sakiin lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Ciidamada Kufaarta Xabshida Itoobiya ee Difaacyada ka sameystay duleedka degmadaasi ayaa intii uu dagaalka socday wax gurmad ah aanan u sameynin maleeshiyaatkii iyaga Kabo qaadka u ahaa ee lagu weeraray gudaha degmadaasi.
Halkan Ka Dhageyso Warbixinta Dagaalka Qansaxdheere.